Heliocentrism: waa maxay, yaa muujiyey iyo maxay ka kooban tahay | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 20/07/2021 11:58 | Astronomy
Markii hore waxaa loo maleynayay in meerayaasha oo dhan ay ku wareegayaan dhulka. Aragtidan waxaa loo yiqiinay (geocentrism). Mar dambe oo qarnigii XNUMXaad yimid Nicolaus Copernicus si loogu dhajiyo inay ahayd qorraxda bartamaha koonkan. Waxay ahayd qaybta dhexe ee meerayaasha inteeda kale iyo xiddiguhu ku meeraystaan. Aragtidaan waxaa loo yaqaanay heliocentrism.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato heliocentrism, astaamaheeda iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu kala duwan yahay.
1 Astaamaha heliocentrism
2 Taariikh nololeedka yar ee Copernicus
3 Heliocentrism iyo geocentrism
Badhtamihii qarnigii XNUMXaad, aragtida heliocentric-ka ama heliocentrism-ka ee uu soo jeediyey Nicolaus Copernicus waxay u qaadatay in qorraxdu tahay udub-dhexaadka koonkan, meerayaasha iyo xiddiguhuna ku meegaarmayaan halkii ay ka ahaan lahaayeen Dunida, sida lagu fikiray illaa qarnigii XNUMXaad ee AD
Kahor daabacaadda iyo faafinta Copernicus's De Revolitionibus Orbium Coelestium (On Revolutions of the Celestial Orbs, 1543), aragtida ugu caansan uguna aqbalsan Yurub waxay ahayd aragtida cirbixiyeenka reer Hellenist Claudius Ptolemy (qarnigii XNUMXaad AD). Ptolemy wuxuu taageeray aragtida Aristotle ee ah in dhulku yahay udub dhexaadka koonka wuxuuna abuuray qaab lagu sharaxo dhaqdhaqaaqa kaladuwan ee qorraxda, meerayaasha iyo xiddigaha daafaha dunida ku baahsan, kaas oo lagu soo bandhigay shaqadiisa Almagest, oo ay faafinayeen Carabta iyo Masiixiyiintu. Aad baa loo faafiyey ilaa iyo qarnigii XNUMXaad.
Qoraagii ugu horeeyey ee soo jeediya in qorraxdu tahay udub dhexaadka koonka wuxuu ahaa Aristarchus of Samos (270 BC). Wuxuu ahaa muqaddas maktabadda Alexandria. Wuxuu kaloo qiyaasey cabirka dhulka iyo inta u dhexeysa dhulka iyo qorraxda. . fogaanta. Laakiin fikradani kama adkaan doonto midda uu soo saaray Aristotle. Dhulka waa la hagaajiyay, waxaa ku wareegsan qaybo isdaba jooga oo qorraxda, dayaxa, meerayaasha iyo xiddigo kale la geliyay. Nidaamkan waxaa markii dambe kaamil noqday Claudius Ptolemy (145 AD), oo ah muwaadin kale oo ka socda Maktabadda Alexandria.
Laakiin waa inaan sugno illaa qarnigii XNUMXaad, iyo hawshii wadaadka reer Poland, xisaabiye iyo falanqeeye Nicholas Copernicus, kahor dhulka waxaa lagu beddeli karaa qorraxda oo waxay noqon kartaa xarunta koonkan. Aragtida heliocentric waxay qorraxda dhigtaa bartamaha koonka, Dunida, meerayaasha kale, iyo xiddiguhuna way ku wareegaan. Copernicus wuxuu kaloo u qaatay in dhulku leeyahay seddex nooc oo dhaqdhaqaaq ah: dhaqdhaqaaqa qorraxda, wareegga, iyo leexashada hareeraheeda. Copernicus wuxuu ku saleeyay aragtidiisa sabab macquul ahaaneed iyo jadwal taxane ah iyo xisaabinta si loo saadaaliyo dhaqdhaqaaqa xiddigaha.
Buugga kor ku xusan, Copernicus wuxuu ku sheegay waxyaabaha soo socda ee ku saabsan heliocentrism:
Dhammaan dhinacyada waxay ku wareegayaan qorraxda, taas oo ku taal dhammaantood […] dhaqdhaqaaq kasta oo u muuqda inuu ka dhacayo aagga xiddigaha go'an dhab ahaan maahan dhaqdhaqaaq dambe, laakiin wuxuu u jeedaa dhaqdhaqaaqa dhulka ".
Taariikh nololeedka yar ee Copernicus
Nicolás Copernicus wuxuu ka dhashay qoys hodan ah oo shaqadooda ugu weyni tahay ganacsi. Si kastaba ha noqotee, wuxuu agoon ku noqday da'da 10. Cidlo soo food saartay, adeerkiis ayaa daryeelay. Saamaynta adeerkiis waxay ka caawisay Copernicus inuu horumar weyn ka helo dhaqanka wuxuuna sidoo kale sii kiciyay dadka xiisaha ay u qabaan caalamka.
Sannadkii 1491 wuxuu galay Jaamacadda Krakow oo uu maamulo adeerkiis. Waxaa la rumeysan yahay in haddii Copernicus uusan agoon ahaan lahayn, Copernicus uusan waxba ka badneyn ganacsade sida qoyskiisa oo kale. Horeba heer sare oo jaamacadeed, wuxuu sii waday inuu aado Bologna si uu u dhammeeyo tababarkiisa. Wuxuu kaqeyb galay koorsooyin sharciga sharciga ah wuxuuna kahelay hagitaan bini aadamnimada Talyaaniga. Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii dhaqameed ee xilligaas waxay saameyn wax ku ool ah ku yeesheen dhiirrigelintiisa si loo horumariyo aragtida heliocentric ee horseeday kacaankii.
Adeerkiis wuxuu dhintay 1512. Copernicus wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo booska kiniisadda ee kaniisadda. Horay bay u ahayd 1507 markii uu faahfaahin ka bixiyay bandhigiisii ​​ugu horreeyay ee aragtida heliocentric. Si ka duwan wixii loo maleynayay in Dhulku uu yahay udub-dhexaadka Caalamka iyo in dhammaan meerayaasha, oo ay ka mid tahay Qorraxda, ay ku meeraystaan ​​hareeraha, ka soo horjeedka ayaa la muujiyay. Laakiin shaqada aakhirka ka dhigaysa aragtidiisa in la ogaado, On the Revolutions of the Celestial Orbs, waxaa la soo saaray 1543, isla sannadkaas Copernicus u dhintay istaroog.
Heliocentrism iyo geocentrism
Aragtidan, waxaa lagu fiirsaday sida qorraxdu u noqotay xarunta nidaamka qorraxda oo dhulku u ku meeraysto. Iyadoo lagu saleynayo aragtidan heliocentric, dhammaan kuwa baranaya cilmiga xiddigiska waxay bilaabeen inay soo saaraan oo ay qaybiyaan tiro aad u badan oo nuqulo gacmeed lagu qoray qorshaha. Aragtidan awgood, Nicholas Copernicus waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cirbixiyeen la yaab leh. Dhammaan cilmi-baaristaada ku saabsan caalamka waa inay ku saleysnaadaan aragtida ah in meerayaasha ku meeraystaan ​​qorraxda.
Shaqada Copernicus waa la balaariyay si ay u sharaxdo una difaacdo aragtida heliocentric si faahfaahsan. Layaab ma leh, si loo muujiyo aragti wax ka beddeleysa dhammaan waxyaabaha hadda laga aaminsan yahay caalamka, waa in lagu difaacaa caddeyn beenin karta aragtida.
Shaqada, waxaan arki karnaa in koonku uu leeyahay qaab dhismeed xaddidan, oo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ugu waawayn ay yihiin kuwo wareegsan, maxaa yeelay iyagu waa dhaqdhaqaaqa kaliya ee ku habboon dabeecadda meydadka samada. Aragti ahaantiisa, waxyaabo badan oo is burinaya ayaa laga heli karaa fikradda adduunka ka hor kan. In kasta oo dhulku uusan ahayn xaruntii iyo meerayaashu mar dambe kuma meeraystaan, haddana ma jirto hal xarun oo ay wadaagaan dhammaan jidadka samaawiga ah ee ku jira nidaamkeeda.
Dhinaca kale, markii hore dhaqan-galintu way jirtay. Waa tusaale samaysanaya koonkan oo la xiriira mowqifka Dunida. Waxaa ka mid ah bayaannada aasaasiga ah ee aragtidan:
Waa meeraad gaar ah oo gaar ah haddii aan isbarbar dhigno qeybaha kale ee samada.. Tani waa sababta oo ah ma guurto oo waxay leedahay astaamo u gaar ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan heliocentrism iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Heliocentrism